Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo le-Microsoft Outlook. I-Scanpst.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo le-Microsoft Outlook (Scanpst)
Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo le-Microsoft Outlook (Scanpst)
Okwe-Outlook 2007 nezinguqulo zangaphambilini, iMicrosoft inikeza ithuluzi lokulungisa Ibhokisi lokungenayo lamahhala, elibizwa nangokuthi i-scanpst, elingalungisa amaphutha amancane kumafayili e-Outlook PST akhohlakele.
Ifakwe neMicrosoft Outlook futhi ungayithola ngokusesha i- “scanpst.exe” kukhompyutha yakho yangakini. Noma ubheka ifayili ngaphansi kwezinkomba ezilandelayo:
Windows Uhlobo lwe-Outlook Indlela ye-scanpst.exe
32bit I-Outlook 2003 ukushayela:Amafayela OhleloMicrosoft OfficeOFFICE11
32bit I-Outlook 2007 ukushayela:Amafayela OhleloMicrosoft OfficeOFFICE12
32bit I-Outlook 2010 (32bit) ukushayela:Amafayela OhleloMicrosoft OfficeOFFICE14
64bit I-Outlook 2010 (32bit) idrayivu: Amafayela Ohlelo (x86) I-Microsoft OfficeOFFICE14
64bit I-Outlook 2010 (64bit) idrayivu: Amafayela OhleloMicrosoft OfficeOFFICE14
32bit I-Outlook 2013 (32bit) idrayivu: Amafayela OhleloMicrosoft OfficeOFFICE15
64bit I-Outlook 2013 (32bit) idrayivu: Amafayela Ohlelo (x86) I-Microsoft OfficeOFFICE15
64bit I-Outlook 2013 (64bit) idrayivu: Amafayela OhleloMicrosoft OfficeOFFICE15
lapho ukushayela: idrayivu lapho ufaka khona ikhophi lakho le-Outlook.
Uma ufaka inguqulo ye- “Click to Run” ye-Outlook 2010 neka-2013, udinga ukulandela imiyalo ku https://support.microsoft.com/en-us/office/repair-outlook-data-files-pst-and-ost-25663bc3-11ec-4412-86c4-60458afc5253 ukuthola i-scanpst.exe.
Imininingwane ethe xaxa mayelana nokusebenzisa leli thuluzi lamahhala ingatholakala ku:
DataNumen Outlook Repair kungcono kakhulu kune-Scanpst:
Yize i-scanpst ingaba usizo ekutholeni amafayela akhohlakele e-Outlook PST, DataNumen Outlook Repair kungcono kakhulu, ngoba:
I-Scanpst yakha kabusha ifayela ngokuya ngesakhiwo sefayela le-Outlook PST yoqobo. Noma kunini lapho kukhona amaphutha enza ukwakheka kwefayela kungabonakali, isibonelo, i-Outlook ihlangabezana “Ifayela le-xxxx.pst aliyona ifolda yomuntu siqu.”Iphutha, i-scanpst izokwehluleka. Ngenkathi DataNumen Outlook Repair ube nokuqonda okungcono kwemininingwane yefayela le-Microsoft Outlook PST futhi yenza ukutakula kuzimele esakhiweni sefayela loqobo. Ngakho-ke, noma yimaphi amaphutha esakhiweni ngeke avimbele DataNumen Outlook Repair ekusebenzeni ngempumelelo. Noma isakhiwo sonke sibhujiswe ngokuphelele, DataNumen Outlook Repair ngisengalulama kufayela.
I-Scanpst iqinisekisa kuphela ukuhlangana kwefayela le-PST. Ayenzi amanye amasheke kufayela le-PST. Ngakho-ke, ayikwazi ukuxazulula ukusilela okungokwemvelo kumafayela e-Outlook PST. Isibonelo, ayikwazi ukulungisa ifayela le- amafayela amakhulu we-2GB PST. Ngesikhathi DataNumen Outlook Repair yenzelwe ukubheka nokulungisa konke okukufayela le-PST ukuqinisekisa ukuthi ihlala isetshenziswa kumakhasimende wokugcina.
I-Scanpst yakhelwe kuphela ukulungisa amaphutha kufayela le-PST. Ayikwazi ukuxazulula ezinye izinkinga nge-Outlook, ngokwesibonelo, ukhohlwa iphasiwedi yefayela le-PST, ususa amanye ama-imeyili ngephutha futhi ufuna ukuwasusa, njll DataNumen Outlook Repair yakhelwe ukuxazulula zonke izinkinga ezihlobene ne-Outlook, ngakho-ke ingaxazulula lezi zinkinga njengomoya ohelezayo!
Ngamagama, DataNumen Outlook Repair iphakeme kune-scanpst kuzo zonke izici. Noma kunini lapho uhlangabezana nenkinga ku-Outlook, siphakamisa ukuthi usebenzise DataNumen Outlook Repair.